ပထမဆုံး အနေနဲ အသုံးဝင်ပုံကို ပြောပြသွားပါ့မယ်..။
ဒီ ကောင်လေးက cctv တို လုပ်ဆောင်သည့် video တွေ photo တွေကိုပါ အချိန် စက္ကန့်နေရက် လ နှစ် အတိအကျ မှတ်သားထား
ထူးခြားချက်လေးက ဒီကောင်လေးကို auto audio အဖြစ် ခိုင်းထားမယ်ဆိုရင်.. မိမိ ကန်မရာ ( webcam ) ရှေ့တစ်ခုဖျက်လျောက်
သွားတာမျိုး ကို ဓါတ်ပုံအလိုအလောက် ရိုက် ပြီး အသံ များဖြစ်ပါ အချက်ပေး နိုင်တာလေးတွေရပါတယ်..။
ထိုအပြင် မိမိ webcam သည် မည်မျှ မှုန်နေပါစေ ဒီကောင်လေးထဲမှာကြည့်လျင် အတတိနိုင်ဆုံး ကြည့်လင့်ပျက်သာ
အတော်ကို သုံးလိုကောင်းတာလေးပါ..။ ကဲ ဒါဆို စဖို အချိန်ရောက်လို လေလျော့ ပြီး လက်တွေ့ ချမယ်..။
SC.1.5.0.2_setup.rar ဖိုင်းလေးကို ဒေါင်းလိုင်ပါ.။
SC.1.5.0.2_setup.rar ဖိုင် ကိုဖြည့်လိုက်ပါ ရလာတဲ့ setup
ကို ကွန်ပြုတာမှာ rum လိုက်ပါ.. အောက်က လို
icon လေးရလာပြီးဆိုတာနဲ့လုပ်ငန်းစလိုရပြီးပေါ့ဗျာ.။
ပထမဆုံး မိမိ webcam ကို USB ထိုးလိုက်ပါ .. ပြီးတာနဲ desktop ပေါ့က SecurityCam iconကို ဖွင့်လိုက်ပါ..။
အထက်ပါ ပုံတစ်က SC.1.5.0.2_setup.rar ရဲ့ပုံစုံပါ..
မျှားပြထားတဲ့ 1,2,3,4,5,6,7 စသည် tools များတစ်ခုချင်း ပြောပြသွားပါ့မယ်..။
နာပတ်(၁) လို မျှား ပြထားတဲ့ tools က power tools ပါ . webcam USB ကြိုးထိုးလိုက်ပြီတာနဲ့အောက်က များ အကြီးကြီးပြထားတဲ့ USB DRIVE က အလိုလို ရှာပါလိမ်မယ် မိမိ webcame ကို တွေပြီးဆိုတာနဲ ယခုကဲံ သို့ ပေါလာပြီး အဲဒီ power လေးကို နိတ်လိုက်ပါ..။
နာပတ်(၂) ပြထားတဲ့ မျှားပြထားတဲံ tools ကတော့ အပေါမှာပြောခဲံသလို့auto audio အသံ အော်တဲ့ tools ပါ..။
နာပတ် (၃) မှပြထားတဲ့ မျှားက tools ကတော့ ဖြစ်စဉ်တွေကို photo အဖြစ် သိမ်းဆဲနိုင်ရန်အတွက် photo Compression / Quality ကို ပြုပြင်နိုင်တဲ့ရောပါ..။
နာပတ် (၄) မှပြထားတဲ့ မျှားက tools ကတော့ အကျင်းအကျယ်ပါ..။
နာပတ် (၅) မှပြထားတဲ့ မျှားက tools ကတော့ interval tools ပါ့.။ တစ်နည်း detecting interval ကို မီးနစ် စက္ကန်အလိုက် လုပ်နိင်ရန်အတွက်ပါ..။
နာပတ် (၆) မှပြထားတဲ့ မျှားက tools ကတော့ play action ပါ အောက်ပါ ပုံမှာ ပြထားသည်အတိုင်း..
မိမိ လိုချင်သည့် action ကိုသာ အမှန်ခြစ်ပေးပြီး ရယူနိုင်ပါတယ်..။
နာပတ် (၇) မှပြထားတဲ့ မျှားက tools ကတော့ မိမိ webcam ရဲ အလင်းအမှောင် ချိန်ဆနိုင်တဲ့ bright setting လေးပါ ။
ကဲ အားလုံးလဲ သိလို ကျေနပ်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်..။ အော် မေ့ မလို. ..
မိမိမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ photo များ video များ ဘယ်မှ သွားရှာကြည့်ရမတုန်း.. ဆိုရင်.. ဒီမှာဗျာ...
အထက်ပါ အပုံကိုကြည့်ပြီး သွားလျင် Foldar တစ်ခု ကျလာပြီး ရင် photo နဲ့video ဆိုပြီးဖိုင်လေးကျလာပါလိမ်မယ် အဲဒီမှာ ..
နေ . ရက် . လ နှာရီများနဲအတူ မှတ်သားထားသော video လုပ်ဆောင်ချက်တွေအား ကြည့်ရှူ နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်.။ (နေမင်းသူ)